Bagxeke iziteleka kusizwa abafundi abantulayo | Isolezwe
Bagxeke iziteleka kusizwa abafundi abantulayo
Izindaba / 11 January 2019, 3:23pm / PHILI MJOLI
UMNUZ Mahomed Bux, iPhini likaMengameli wamaJaji, uRaymond Zondo, owakwakhe UNkk Sthembile Zondo noMnuz Shabir Chohan ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inhlangano ezosiza abafundi abantulayo ngokubaxhasa ngemali yokufunda iZondo Bux Education Trust Isithombe: PHILI MJOLI
IZITELEKA zemiphakathi ezihlanganisa ukuvalwa kwemigwaqo ziholela ekutheni abafundi bafeyile.
Lokhu kushiwo umqondisi wezemfundo eHarry Gwala, UNkk Sindi Zakuza-Njakazi, ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni inhlangano ezosiza abafundi abantulayo ngoxhaso lwezemfundo esungulwe yiPhini likaMengameli wamaJaji kuleli, uRaymond Zondo ngokubambisana nomndeni owasiza umndeni wakhe ngesikhathi yena efunda enyuvesi. UZondo nabakwaBux basungule isikhwama iZondo Bux Education Trust ukusiza abaswele.
UNkk Zakuza-Njakazi uthe ukwehla kwe-Amazabeko High ithole u56% ku-matric, ekubeni kade ithola ngaphezulu kuka-80% kwa-matric kukhombisa ukuthi izinkinga zomphakathi ziyayithikameza imfundo.
“Kumele bazali sizibuze ukuthi yini into esiyifunayo? Ukuthi izingane zethu zifeyile njengoba nyakenye kule ndawo kuke kwavalwa imigwaqo ngoJuni, umphakathi ukhala ngezidingo ezithile? Abafundi ba-matric banyakenye abazange bakwazi ukubhala izivivinyo zikaJuni ngoba imigwaqo yayivaliwe. Abafundi bakulesi sikole abazange bahlomule emakilasini angoJuni eHarry Gwala, imigwaqo yayivaliwe kungaphumi lutho,” kusho yena.
Ijaji uZondo uthe nakuba engazi ukuthi ngubani obesesitelekeleni kodwa alikho ilungelo lokuvimbela abafundi.
“Akekho onelungelo lokuvimbela abafundi. Kuyilungelo lomfundi ukuthi afunde, imfundo iyona engasiza ukuthi siqede ububha,” kusho yena. Uqhube wathi le nhlangano isunguleke ngemuva kokuthi yena nomndeni kaBux babe nesidlo.
“Ngathi uma ngibuza uBux ukuthi ngingamkhokhela kanjani njengoba wathengela umama nezingane zakithi igilosa iminyaka emithathu, mina ngisenyuvesi, wangiphendula ngokuthi ngingamkhokhela ngokwenza lokhu angenzela kona kwabanye abadinga usizo,” kusho yena.
Ukwethulwa ngokusemthethweni kwale nhlangano kuhambisana nokuvulwa ngokusemthethweni kwehholo lase-Amazabeko High, amathoyilethi ne-borehole eMazabekweni Primary.
Imali yokwenza lo msebenzi inikelwe yiMuslim African Charitable Trust (MACT)
UMnuz Farook Bayat uthe inhlangano yabo yathinteka uma ibikelwa ngosizi lwemathoyilethi nehholo elingapheli.